Archive du 20190827
Raharaham-pirenena Mamofompofona korontana…
Nenjehina sy noharatsiana fatratra i Marc Ravalomanana ny taona 2009 tamin’ny resaka fiaraha-miasa nampiasan’ny vahiny tany tamin’ny alalan’ny orinasa Koreanina Daewoo.
Fanovana ny satan’ny fanoherana Tsipahin’ny RMDM hatramin’ny farany
Nolaniana amboletra teny amin’ny antenimieram-pirenena, ilay volavolan-dalàna mifehy ny mpanohitra, raha ny fanazavana azo. Mitsipika marin-drano an’izany atoa Alain Andriamiseza sy pasitera Edouard Tsarahame avy amin’ny vovonana Rodoben’ny Mpanohitra
Serge Zafimahova Ravao ny CFM fa tsy mahavaha olana
Misy ny karazana olana sy ny disadisa eny anivon’ny fiarahamonina. Tokony horavana tanteraka anefa ny komitin’ny fampihavanam-pirenena na ny CFM fa tsy mahavaha olana sy ny disadisam-piarahamonina io rafitra iray io.
Taratasin’i Jean Aiza ianao eee !
Any ianao izay ry Jean ! Lasa tsy an-kiteniteny. Fa lasa aiza marina ianao e ?
Fitifirana teny Ampefiloha Nokianin’ny mpahay lalàna
Hita teo anivon’ny haino aman-jery sy tambajotran-tserasera samihafa, hoy ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, ny fitifirana sy fanenjehana olona saika hanao heloka.
Kaominina-Fokontany Tsy tokony hisy elanelana
Ho antsika Malagasy, ny fokonolona no sehatra tsara indrindra ho an’ny fiaraha-miaina, ao no ifampikasohan’ny taranaka mifandimby, ao no ampitana ny soatoavina ary ao no amoahana ny hevitra. Rafi-pitantanana ho an’ny vondron’olona fototra izy.
Antananarivo Renivohitra Notokanana ireo làlana “Ghandi”
Notokanan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana sy ny Masoivohon’i Inde Abhay Kumar tamin’ny fomba ofisialy omaly ny lalana Mahatma Ghandi teny
Fandraisana ny Papa François Hentitra ny toromariky ny praiminisitra
Namory ny OMC (Organisme Mixte de Conception) nasionaly, ny praiminisitra,
Nicolas Dupuis « Hokitihina kely ny Barea ! »
Hoteteziko daholo manomboka any Eoropa ka hatrany Azia, hoy ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra, Nicolas Dupuis, mba hitadiavana izay mbola azo hanatsarana ny firafitry ny Barea.
Filohan’ny FMF vaovao Malalaka tsara amin’ny fitantanana
Malalaka tsara amin'ny fitantanana ny FMF ny filoha vaovaon’ity federasionina malagasin’ny baolina kitra ity, Arizaka Raoul Rabekoto Romain, raha ny fahitan’ny mpitia baolina kitra ny andraikitra arak’asa sy politika sahaniny no jerena.
Efa tamin`ny hetsi-bahoaka notarihan`ny herivelona tamin`ny taona 1991 i Madagasikara no “mianatra demokrasia”.
Lavaka be eny Ampefiloha Miteraka fitohanana, ahiana hitera-doza…
Manaitra ny tompon’andraikitra amin’ny fahasimban’ny lalana mampifandray eto an-drenivohitra ny ankamaroan`ireo mpampiasa lalana.
« Vitrine du Vakinankaratra » faha-22 Hahazo tan-tsoroka ireo mpandraharaha
Hiditra amin'ny andiany faha-22 amin'ity taona ity ny hetsika ara-toekarena « Vitrine du Vakinankaratra ».
Raikitra ny fanadinana CEPE Nidina 9 % ny mpiadina eto Antananarivo
Nidina 9 % ny tahan’ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana CEPE manerana ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra amin’ity taona ity.
Taom-pianarana 2019-2020 Hanomboka amin’ny 28 oktobra
Efa saika tafiditra ao anatin’ny fialantsasatra lehibe avokoa ireo mpianatra manerana ny Nosy ankehitriny ankoatra ireo mbola hiatrika ny fanadinana ara-panjakana.
Fivorian’ny G7 tany Frantsa 251 tapitrisa dolara ampiasaina aty Afrika
Nivory tany Biarritz Frantsa indray ireo firenena matanjaka indrindra mivondrona ao amin’ny G7.
Hopitaly miaramila Soavianandriana Arirarira ny fisotroan-drononon’ny mpiasa
Tsy misitraka ara-dalàna ny vola fisotroan-drononony na ny “pension” tokony horaisiny hatramin’izao ireo mpiasam-panjakana misotro ronono na « fonctionnaires retraités » tamin’ny 2016 tao amin’ny hopitaly miaramila Soavinandriana (CENHOSOA),
Pesta sy ny famadihana Mifanojo hatrany ireo, hoy i Dr Fidy
I Madagasikara irery maneran-tany no mbola firenena ahitana aretina pesta ary eto ihany no mbola ahitana famadihan-drazana isan-taona.
Fianakaviana saika hamadika Razana iray sisa hita tao am-pasana
Mirongatra ny vaky fasana eto amintsika. Fasana iray indray no lasibatr’ireo mpanao ratsy tao Ambohimiarivo, kaominina ambanivohitra Andranomanelatra, distrikan’Antsirabe II ny alatsinainy 19 aogositra lasa teo.
Sampana mpamonjy voinan’ny CUA Manao fanentanana ara-pahadiovana
Ao anatin’ny ezaka fankalazana ny faha-70 taona niorenany ny vondrona mpamonjy voinan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) amin’izao fotoana ka hetsika maro no notanterahina.
Fitrandrahana harena ankibon’ny tany Mahazo vahana tanteraka ny vahiny
Betsaka ny mpandraharaha malagasy misehatra amin’ny fitrandrahana madinika (petites mines) raha oharina amin’ny fitrandrahana vaventy (filières grandes mines).
By Pass - Loza mahatsiravina Maty ny mpamily, vehivavy iray naratra
Maty nosokirina ilay mpamily, tsaboina eny amin’ny hopitaly kosa ilay renim-pianakaviana bevohoka izay voafaoka.
“Kidnapping” sy halatra bevava Sarona ny tambajotra goavana
Mpaka an-keriny na “kidnapping” miisa 11 indray no tratran'ny zandary ka 5 ny vavy ary enina ny lahy.
FITATERAM-BAHOAKA Saran-dalana tapa-dalana nampisavorovoro
Olan’ny saran-dalana tsy nidina nefa ny solika nahitana fihenam-bidy no nahatonga ny ady tamina taksibe iray.
Mpanatitra mpandeha eny Ivato Tazan-davitra sisa rehefa betsaka ny sidina
Niteraka olana ho an’ny mpanatitra sy ny mpandeha ny fijanonana lavitry ny seranam-piaramanidina Ivato, ny faran’ny herinandro teo.